Halyeey kooxda Barcelona ah oo sheegay hal sabab uu Lionel Messi kaga tagi kari karo gaaroonka Camp Nou – Gool FM
(Spain) 06 Dis 2019. Halyeey kooxda Barcelona ah ayaa sheegay in Lionel Messi uusan ka fariisan doonin kubadda cagta mustaqbalka dhow, balse uu go’aansan karo inuu ka tago Barca si uu u tijaabiyo loolan cusub oo meel kale ah.
Heshiiska uu Lionel Messi uu ku joogo kooxda Barcelona ayaa wuxuu dhacayaa xagaaga 2021, laakiin waxaa lagu wadaa inuu kordhiyo qandaraaskiisa maalmaha soo socda ka hor dhamaadka xilli ciyaareedka.
Messi ayaa ka hadlay kaddib markii uu ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or 2019 suurtogalnimada uu kaga fariisanayo kubadda cagta sanadaha soo socda, laakiin laacibkii hore kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Brazil ee Rivaldo ma aaminsana in xiddiga reer Argentina uu go’aankan gaari doono dhawaan.
“Lionel Messi wuxuu ka hadlay suurtogalnimada uu ciyaaraha kaga fariisan karo sanadaha soo socda inta lagu gudi jiray xafladii abaal-marinta Ballon d’Or 2019, kaddib waxaa bilaawday warar badan ee looga hadlayay arrintaas”.
“Waa iska caadi in ciyaaryahan kubada cagta ah uu bilaabo inuu ka fikiro mustaqbalkiisa markii uu 32 jirsado, laakiin taasi waxay ku xirnaan doontaa sida ay u socdaan arrimaha kooxda Barcelona”.
“Haddii Messi uu dareemo uu muhiim u yahay kooxda, isla markaana uu halkiisa ka sii wado ku guuleysiga koobab kama tagi doono mana dhawaaqi doono inuu ka fariisto kubadda cagta, laakiin haddii taasi badelkeedu dhacdo, wuxuu ku fikiri doonaa inuu baxo”.
“Haddii uu dareemo inuu xiddig caadi ah ka noqdo gudaha kooxda, isla markaana uusan ka noqonin xiddig weyn oo muhiim ah, waa inuu ku fikiraa inuu baxo oo uu waayo-aragnimo cusub helo”.
“Messi weli wuxuu doonayaa inuu ku guuleysto Copa America iyo Koobka Adduunka, marka waa inuu ku ciyaaraa heerka ugu sarreeya ilaa iyo laga gaarayo Koobka Adduunka, sidaas darteed wali waa xilli hore si uu kaga fariisto kubadda cagta”.